Izindaba - Umkhakha wezobuchwepheshe osemqoka usalele emuva kancane, ukukhuphuka komkhakha wamaphampu wezwe lami kusekude phambili
Isikhathi esithile, ukuthuthukiswa kwemboni yamapompo yezwe lami bekulokhu kukhula kakhulu. Iqhutshwa yizinqubomgomo zezwe ezinhle zokukhiqiza, zombili izilinganiso zezimboni kanye namazinga ezobuchwepheshe athuthukiswe kakhulu ngokwethulwa kwezindlela eziningi njengokumunca, ukuvuselela kanye noguquko, nokugaya ukudla nokwenza izinto ezintsha. Ikakhulu, izinga lemikhiqizo esekelayo yobuchwepheshe obukhulukazi bepompo nemishini selifinyelele ezingeni elihola umhlaba wonke.
Kuyaqondakala ukuthi ngaphansi kokuqondiswa kwesidingo semakethe, imikhiqizo yamaphampu ephezulu yezwe lami njengamaphampu amakhulu okucindezela okuphezulu anamalungelo empahla yengqondo ezimele akhe amandla okweseka anele futhi abonakalayo emkhakheni wamandla kagesi, okusansimbi, amakhemikhali kaphethiloli, kanye nokuvikelwa kwemvelo. Futhi ngokuguqulwa kwesakhiwo sohlangothi lokuphakela kanye nokwenza ngcono izinga lobuchwepheshe lilonke, amandla jikelele wemboni yamaphampu ezwe lami alinciphise kakhulu igebe namazwe athuthukile.
Ngemuva kokungena “kuHlelo Lweminyaka Emihlanu Emihlanu”, ukuqaliswa kwezinsizakusebenza ezinkulu zobunjiniyela kuye kwashesha, futhi ukongiwa kwamandla kanye nokwehliswa kokungcola ezindaweni ezibalulekile kube yinto okugxilwa kuyo emsebenzini. Impi yokuvikela isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka, ukuvimbela kanye nokulawula ukungcoliswa kwamanzi, kanye nokulawulwa kwensimbi esindayo sekuqhubekele phambili ngokujula, futhi inqubo yokuvikela nokulawulwa kokungcola ikhuthazwe ngamandla. Ukubaluleka komkhakha wepompo kuyaziveza.
Imininingwane ikhombisa ukuthi usayizi wemakethe wemboni yezwe lami yepompo ku-2017 wawuzungeze ama-170 billion. Izibalo ezingaphelele zikhombisa ukuthi cishe kunezinkampani zamaphampu ezingama-7,000 ezweni lonke namabhizinisi angaphezu kwe-1 000 ngaphezu kosayizi obekiwe. Ngokuvutshelwa okuhle kwezinqubomgomo zikazwelonke nezasekhaya, ikusasa lemboni alilihlaba umxhwele.
Inqubekela phambili esheshayo, ukunakwa okudume umhlaba wonke, impumelelo evelele… Lawa magama okudumisa asetshenziswa ngokufanele embonini yamaphampu ezweni lethu, kepha ngemuva kwezimbali eziqhakazayo, kukhona nezinkinga ezingeke zanganakwa.
Okokuqala, inani lama-SME likhulu kakhulu. Enqubweni yokuthuthuka okusheshayo komkhakha wepompo, izinkampani zamaphampu ezincane nezisemaphakathi kanye nezinkampani ezizimele zamaphampu ziye zavela zilandelana, futhi zithatha ingxenye enkulu yenani eliphelele lezinkampani zamaphampu. Kukhona ukusweleka kwezinkampani ezinkulu, futhi uphawu kanye nengqikithi yezinkampani ezincane akuqinile, okungahambisani nentuthuko yonke yomkhakha wepompo.
Okwesibili, ukuhlushwa kwemakethe kuphansi. Ngokuncipha kwesidingo semakethe nokunikezwa okwanele, imboni yamaphampu yezwe lami iyaqhubeka nokukhula, kepha amandla emakethe ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyikhulu alungele ukuhamba. Uma kuqhathaniswa nosayizi omkhulu wemakethe, inani lokumaketha liphansi, futhi ukuthengiswa kwaminyaka yonke kwebhizinisi elikhulu kakhulu kungaphansi kwezigidigidi eziyishumi noma ngaphansi kwezigidigidi ezi-5. Ngakho-ke, kunesidingo esiphuthumayo sokwandisa ukugxila emakethe.
Okwesithathu, ngokuya ngemihlahlandlela yamasu wezwe “yokwethula, ukugaya, ukumunca, kanye nokwenza izinto ezintsha”, imboni yezimpompo yezwe lami isizuzile impela. Kodwa-ke, ekusebenzeni kwangempela, izinkampani eziningi zivame ukwethula Kukhona ngisho nezimbalwa, okwenza ukuthuthukiswa kwemboni yamapompo yezwe lami iwele embuthanweni ongajwayelekile. Abukho ubuchwepheshe obuningi futhi obuncane obunamalungelo obunikazi bokuzimela.
Ngokuvamile, yize imikhakha eminingi yemikhiqizo embonini yamaphampu yezwe lami ithole ukukhiqizwa nokuzimela okuzimele, zimbalwa izigaba zemikhiqizo ezinamalungelo ezinto ezizimele zobuhlakani, futhi ubuchwepheshe obubaluleke kakhulu obusezandleni zamazwe athuthukile, ukuze izinkampani zamaphampu ezwe lami basesimweni esiphansi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yamaphutha ocwaningweni oluyisisekelo lobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kwemishini eyisisekelo kanye nezinto eziyisisekelo embonini yamaphampu yezwe lami kusilele emuva, okube yisithiyo esikhulu ekuthuthukiseni imboni, futhi kubhekene nengozi yokuqeda amandla okukhiqiza aphelelwe yisikhathi. Ngakho-ke, ukukhuphuka komkhakha wepompo kusekude phambili. .